Famotidine vs. omeprazole: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | မေ 2022
ရပ်ရွာ ပြင်းထန်သောအားကစား ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Famotidine vs. omeprazole: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Famotidine နှင့် omeprazole တို့သည်အစာခြေပြproblemsနာများစွာကိုကုသရာတွင်သုံးနိုင်သောအသုံးများသောဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သငျသညျ duodenal အစာအိမ်နာသို့မဟုတ် gastroesophageal reflux ရောဂါ (GERD) ၏ရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့နေရသည်ဖြစ်စေသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် famotidine သို့မဟုတ် omeprazole ကဲ့သို့သောဆေးကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ ဒီဆေးတွေအစာအိမ်ထဲမှာအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့ချဖို့အလားတူနည်းလမ်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ဆေးကောင်တာ (OTC) တွင်တွေ့ရသော်လည်း famotidine နှင့် omeprazole တို့ကိုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ကညွန်းနိုင်သည်။
Tums (calcium carbonate) ကဲ့သို့သော Antacids များကို H2 blocker ကဲ့သို့သောအားကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုမစတင်မီပထမအကြိမ်စမ်းသပ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာ omotrazole ကဲ့သို့သောပရိုတွန် pump inhibitor (PPI) ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, famotidine နှင့် omeprazole ကျယ်ပြန့်ရရှိနိုင်ပါသည်ယေဘုယျဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအက်ဆစ်လျှော့ချရေးစဉ်းစားနေကြသည်နေစဉ်, သူတို့ကသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဘယ်လိုသူတို့အသုံးပြုပါတယ်ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသည်။
famotidine နှင့် omeprazole အကြားအဓိကကွာခြားချက်များကဘာလဲ။
Famotidine (famotidine ကူပွန်) များကို၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ် Pepcid မှလည်းလူသိများသည်။ ဒါဟာအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည် H2 blocker သို့မဟုတ် H2-receptor ရန်။ Famotidine သည်အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်အစာအိမ်အတွင်းရှိ histamine ဟုခေါ်သောအရာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
Famotidine ၏သက်ရောက်မှုများ (ပိုမို famotidine အသေးစိတ်အချက်အလက်များ) ကိုတစ်နာရီအတွင်းခံစားနိုင်ပြီးဆေးသောက်ချိန်ပေါ် မူတည်၍ ၁၂ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။ Famotidine ဆေးများကိုအစာခြေခြင်းပြdailyနာများအတွက်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
Omeprazole (omeprazole ကူပွန်) များကို Prilosec သို့မဟုတ် Prilosec OTC ဟုခေါ်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆေးအဖြစ်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ famotidine နှင့်မတူဘဲ omeprazole ကိုaဟုခွဲခြားထားသည် ပရိုတွန် pump pump inhibitor (PPI) ။ အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်အစာအိမ်နံရံရှိပရိုတွန်ပန့်များကိုတိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
Omeprazole ၏သက်ရောက်မှုများ (နောက်ထပ် omeprazole အသေးစိတ်များ) ကိုယူပြီးတစ်နာရီအကြာတွင်လျင်မြန်စွာခံစားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်း၏ antisecretory အကျိုးသက်ရောက်မှုအထိကြာရှည်နိုင်ပါတယ် ၇၂ နာရီ , famotidine ထက်အများကြီးပိုရှည်သည်။ Omeprazole ကိုများသောအားဖြင့်တစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
famotidine နှင့် omeprazole အကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားမှု
မူးယစ်ဆေးအတန်း H2 blocker ပရိုတွန် pump Inhibitor (PPI)
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဘာလဲ? Pepcid Prilosec
မည်သည့်ပုံစံ (များ) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးထဲသို့ဝင်သနည်း။ တက်ဘလက်
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? Duodenal အနာ - တစ်နေ့လျှင် ၄၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်
GERD - တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ် Duodenal အနာ: တစ်နေ့လျှင် 20 mg
GERD: တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ကုသမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိကြာသည် ကုသမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ၄ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိကြာသည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အသက် ၁၇ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသက် ၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြားကလေးများသည်ဆရာ ၀ န်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဤဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ အသက် ၁၇ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများနှင့်ကလေးများ အသက် ၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြားကလေးများသည်ဆရာ ၀ န်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဤဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။
famotidine နှင့် omeprazole အားဖြင့်ကုသအခြေအနေများ
GERD၊ duodenal အနာနှင့်အစာအိမ်အနာတို့ကိုကုသရန် Famotidine နှင့် omeprazole ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို FDA ကထောက်ခံတယ် တိုက်စားမှုအစာပြွန် (EE) သို့မဟုတ်အစာပြွန်အတွင်းရှိနံရံရောင်ခြင်း။ တိုက်စားခြင်းအစာပြွန်သည် GERD ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Zollinger-Ellison syndrome ရောဂါကဲ့သို့ hypersecretory အခြေအနေများအတွက်ဆေးညွှန်း famotidine နှင့် omeprazole တို့ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤဆေးများသည်ရှားရှားပါးပါးရောဂါများကြောင့်အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ရံဖန်ရံခါ (သို့) မကြာခဏသက်သာခြင်းအတွက် famotidine နှင့် omeprazole ဗားရှင်းမတူသော (OTC) ဗားရှင်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပူလောင်ခြင်း ။ အစာအိမ်အက်ဆစ်သည်အစာပြွန်သို့အစာကျွေးသောအခါအက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းသည်ရင်ပူခြင်း၏ဘုံအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
Omeprazole သည် FDA မှအတည်ပြုသောဆေးဖြစ်သည် Helicobacter pylori သို့မဟုတ် အိပ်ချ် pylori ကူးစက်ရောဂါများ။ ဒီရောဂါကူးစက်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကအစာအိမ်နံရံကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ amoxicillin သို့မဟုတ် clarithromycin ကဲ့သို့သောပantibိဇီဝဆေးနှင့်ပေါင်းစပ် Omeprazole ပါဝင်သည်။
အခြေအနေ ရေနံချောင်း Omeprazole
Gastroesophageal reflux ရောဂါ (GERD) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Duodenal အနာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အစာအိမ်အနာ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ပူလောင်ခြင်း ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
တိုက်စားခြင်းအစာပြွန် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Hypersecretory အခြေအနေများ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
အိပ်ချ် pylori ရောဂါကူးစက် မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
နာတာရှည်ဆီးသွားခြင်း တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည် မဟုတ်ဘူး
Barrett အစာပြွန် မဟုတ်ဘူး တံဆိပ်ကပ်ထားပါသည်
famotidine သို့မဟုတ် omeprazole ပိုမိုထိရောက်ပါသလား
famotidine နှင့် omeprazole နှစ်မျိုးလုံးသည် GERD နှင့်အခြားအစာခြေအခြေအနေများကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သောဆေးများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယေဘုယျသဘောတူညီမှုမှာ omeprazole သည် famotidine ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သောဆေးဖြစ်သည်။
ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ PPIs ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည် duodenal အနာကုသရာတွင်ပိုမိုထိရောက်သော H2 blockers ထက်။ PPIs များသည် H2 blockers များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနာရောဂါကုသမှုကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ Prevacid (lansoprazole), Protonix (pantoprazole) နှင့် Aciphex (rabeprazole) တို့ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာခဲ့သော PPIs များအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။
Clopidogrel နှင့် Aspirin စသည့်သွေးပါးလွှာသောလူများတွင်အနာများကိုကာကွယ်ရန် PPI သို့မဟုတ် H2 blocker ကိုသုံးနိုင်သည်။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအရ PPIs များသည် H2 blockers ထက်သာလွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် အစာအိမ်အနာကာကွယ်တားဆီး ။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် Prilosec (omeprazole) သို့မဟုတ် Nexium (esomeprazole) ကို Pepcid (famotidine) သို့မဟုတ် Zantac (ranitidine) တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့သည်။
famotidine သို့မဟုတ် omeprazole မသောက်မီသင့်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူထံမှဆေးကုသမှုခံယူရန်အရေးကြီးသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောမူးယစ်ဆေးဝါးသည်နောက်ဆုံး၌သင်၏အခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးသောဆေးဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သော: Lansoprazole ကူပွန် | Protonix ကူပွန် | Rabeprazole ကူပွန် | Clopidogrel ကူပွန် | Aspirin ကူပွန် | Prilosec ကူပွန် | Nexium ကူပွန် | Pepcid ကူပွန် | Zantac ကူပွန်
Omeprazole စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Omotrazole နှင့် famotidine တို့၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှု
Medicare အပိုင်း D အစီအစဉ်များနှင့်အခြားအာမခံအစီအစဉ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့် famotidine ဆေးပြားများကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်။ သင်၌အာမခံလွှမ်းခြုံမရှိပါက Famotidine သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ လက်လီစျေးနှုန်းကျနိုင်သည်။ သင်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက SingleCare သည် famotidine ကဲ့သို့သောဆေးဝါးများအတွက်အထူးလျှော့စျေးကူပွန်များပေးထားသည်။ SingleCare famotidine ကူပွန်နှင့်အတူသင် $ 9- $ 30 ပေးဆောင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
Omeprazole နောက်ကျသောဆေးတောင့်များသည် Medicare နှင့်အာမခံအစီအစဉ်အများစုတွင်ပါဝင်သည်။ Omeprazole ၏လက်လီရောင်းချမှုသည်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၇၀ ခန့်ရှိသည်။ ယေဘူယျ omeprazole ဆေးတောင့်အတွက်ဤကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန် SingleCare ကူပွန်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ SingleCare omeprazole ကူပွန်နှင့်အတူ, သင် 20 မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်အဘို့အ $ 15 ဝန်းကျင်အထိစျေးနှုန်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
စံသောက်သုံးသော 20 mg ဆေးပြား (အရေအတွက် 60) 20 mg ဆေးတောင့် (အရေအတွက် 30)
ပုံမှန် Medicare copay $ 0- $ 21 $ 0- $ 19
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 9- $ 30 $ 15 +
famotidine နှင့် omeprazole ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Famotidine နှင့် Omeprazole တို့၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အခြားအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာများသောအားဖြင့်အစာအိမ်နာခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Omeprazole သည်လည်းဓာတ်ငွေ့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်ဤဆေးများတွင်ပါ ၀ င်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေသည်။ မတည့်မှုတုံ့ပြန်မှုများတွင်အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသက်ရှူခြင်းပြtroubleနာများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဆိုးရွားသောဆိုးကျိုးများခံစားရပါကဆေးကုသမှုခံယူပါ။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ≥1% ဟုတ်တယ် ၇%
မူးယစ်ဆေးဝါး ဟုတ်တယ် ≥1% ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် ≥1% ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် ≥1% ဟုတ်တယ် ၄%
ဗိုက်နာသည် ဟုတ်တယ် <1% ဟုတ်တယ် ၅%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် <1% ဟုတ်တယ် ၄%
အော့ ဟုတ်တယ် <1% ဟုတ်တယ် ၃%
ဝမ်းရောဂါ မဟုတ်ဘူး - ဟုတ်တယ် ၃%
ရင်းမြစ် - DailyMed ( ရေတံခွန် ), DailyMed ( omeprazole )
omeprazole vs. famotidine ၏မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
Famotidine သည်အစာအိမ်အက်ဆစ်ပေါ် မူတည်၍ စုပ်ယူမှုအတွက်မူတည်သောဆေးများနှင့်အဓိကဆက်သွယ်သည်။ ထိုဆေးများတွင် atazanavir နှင့် rilpivirine ကဲ့သို့သော antiretroviral နှင့် ketoconazole နှင့် itraconazole ကဲ့သို့သော antifungals တို့ပါဝင်သည်။ Famotidine သောက်ခြင်းသည်ဤဆေးဝါးများ၏စုပ်ယူမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးသူတို့၏ခြုံငုံထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ဆက်စပ်သော: Atazanavir ကူပွန် | Atazanavir ဆိုတာဘာလဲ | Ketoconazole ကူပွန် | Ketoconazole ဆိုတာဘာလဲ။ | Itraconazole ကူပွန် | Itraconazole ဆိုတာဘာလဲ။
Famotidine သည် tizanidine နှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည် ကြွက်သားလျှော့ပေါ့ ၎င်းသည်အသည်းအတွင်းရှိ CYP1A2 အင်ဇိုင်းများမှပြုလုပ်သည်။ Famotidine သည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိ tizanidine ပမာဏကိုတိုးပွားစေပြီးသွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်း (သွေးတိုးရောဂါ)၊ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း (bradycardia) သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းငိုက်မျဉ်းခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
Omeprazole သည် antiretroviral ဆေးအချို့နှင့်လည်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ famotidine နှင့်မတူသည်မှာ omeprazole သည်အသည်းရှိ CYP2C19 နှင့် CYP3A4 အင်ဇိုင်းများမှထုတ်လုပ်သည့်ဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဤဆေးများတွင်အခြားဆေးများအကြားတွင် tacrolimus နှင့် rifampin တို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
Omeprazole သည် warfarin နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောသွေးထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ omotrazole ကို methotrexate ဟုခေါ်သည့် immunosuppressant ဖြင့်သောက်ခြင်းသည် methotrexate အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း ရေနံချောင်း Omeprazole
Fosamprenavir Antiretrovirals ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Dasatinib ဓာတုကုထုံး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Itraconazole antifungal ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Tizanidine ကြွက်သားလျှော့ပေါ့ ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
Methotrexate ခုခံအားကျဆင်းမှု မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Warfarin Antikoagulant မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Rifampin ပိဇီဝဆေး မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
famotidine နှင့် omeprazole ၏သတိပေးချက်များ
ပြင်းထန်သော GERD လက္ခဏာများသို့မဟုတ်အနာများသည်အချို့သောလူများတွင်အူသိမ်အူမကင်ဆာ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ PPI (သို့) H2 blocker ဖြင့်ကုသမှုကိုမတုံ့ပြန်သောသူများအတွက်နောက်ထပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းလိုအပ်နိုင်သည်။
Famotidine ကိုသတိဖြင့်အသုံးပြုသင့်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိသူများ။ Famotidine အသုံးပြုမှုသည်ရှုပ်ထွေးမှု၊ delirium နှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းများစသည့် CNS (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်) ၏ဆိုးကျိုးများပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Omeprazole သည် famotidine နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုသတိပေးချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ Famotidine နှင့်မတူသည်မှာ omeprazole နှင့်အခြား PPIs များသည်ရေရှည်အသုံးပြုသောအခါအရိုးပွရောဂါနှင့်အရိုးကျိုးခြင်းအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
Omeprazole ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဆေးရုံတစ်ရုံ၌အန္တရာယ်ပိုမိုများပြားလာနိုင်သည် Clostridium difficile ဆက်စပ်ဝမ်းလျှော။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရပရိုတွန် pump pump inhibitors များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည် လေးနက်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများပိုမိုအန္တရာယ်များ အဆုတ်ရောင်နဲ့တူ C. diff ရောဂါကူးစက်မှု ။ ဤလေ့လာမှုသည်ဆေးရုံ ၇၁ ခုမှအချက်အလက်များကိုယူပြီးလူ ဦး ရေအလိုက် PPI နှင့် H2-blocker အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။
famotidine vs. omeprazole နှင့်ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Famotidine သည် HER blocker ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး GERD၊ duodenal အနာနှင့်အစာအိမ်အနာတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ အရွယ်ရောက်သူများတွင် Zollinger-Ellison syndrome ကဲ့သို့သော hypersecretory အခြေအနေများကိုကုသရန် FDA ကအတည်ပြုထားသည်။ Famotidine သည် Pepcid ၏ယေဘူယျပုံစံဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
Omeprazole သည်ပရိုတွန် pump inhibitor (PPI) ဖြစ်ပြီး GERD နှင့်အနာစသည့်အစာခြေအခြေအနေများကိုကုသရန် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ၎င်းကိုကုသရန်အသုံးပြုသည် အိပ်ချ် pylori ရောဂါကူးစက်မှု ။ Omeprazole ကို ၄ င်း၏အမှတ်တံဆိပ် Prilosec (သို့) Prilosec OTC ဟုလူသိများသည်။ ၄ င်းမှရှစ်ပတ်ကြာလျှင်တစ်ကြိမ်သောက်လေ့ရှိသည်။
famotidine နှင့် omeprazole အတူတူလား?
Famotidine နှင့် omeprazole အတူတူမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်အလားတူအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကုသသော်လည်းသူတို့သည်မတူညီသောဆေးများဖြစ်သည်။ Famotidine သည် H2 blocker ဖြစ်ပြီး omeprazole သည် PPI ဖြစ်သည်။
famotidine သို့မဟုတ် omeprazole ပိုကောင်းပါသလား
Omeprazole ကို famotidine နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုထိရောက်သောဆေးဖြစ်သည်။ Omeprazole သည်ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ကြာရှည်ခံသည် နေ့တိုင်းသောက်ပြီးနောက်တိုးမြှင့်ကြောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ။ ဤသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှု famotidine နှင့်အတူမမြင်ရ သို့သော် omeprazole သည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုဆိုးရွားသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် famotidine သို့မဟုတ် omeprazole ကိုသုံးနိုင်သလား။
Famotidine သည် omeprazole နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ထိခိုက်မှုနည်းစေနိုင်သည်။aရွေးချယ်သောအခါသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ကုသမှုနည်းလမ်း သို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း။
ငါအရက်နှင့်အတူ famotidine သို့မဟုတ် omeprazole ကိုသုံးနိုင်သလား?
Famotidine ကိုအရက်ဖြင့်ရှောင်သင့်သည်။ Famotidine သောက်နေစဉ်အရက်ကိုသောက်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးခြင်းသို့မဟုတ်ငိုက်မျဉ်းခြင်းကဲ့သို့သော CNS ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများမြင့်တက်နိုင်သည်။ Omeprazole ကိုအသင့်အတင့်သောက်သုံးခြင်းကကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးများတိုးလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါကဆေးများကိုအရက်နှင့်ရောစပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
လူတိုင်းသည်ဆေးဝါးများကိုကွဲပြားစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အလုံခြုံဆုံးအက်စစ်ဖလိုဆေးသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။ famotidine နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက omeprazole သည်အန္တရာယ်ပိုများနိုင်သည် ဆိုးကျိုးများ အထူးသဖြင့်ရေရှည်အသုံးပြုသောအခါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် Pepcid ကိုနေ့စဉ်ခြောက်လ၊ ရှစ်၊ ၁၂ ပတ်အထိတစ်ကြိမ်သောက်သုံးသည်။ ကုသမှုကြာချိန်သည်ကုသခံနေရသည့်အခြေအနေပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင် Pepcid အတွက်မည်မျှကြာကြာသောက်သင့်သည်ကိုသိရန်သင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။ မကြာခဏဖြစ်သည့်ရင်ပူမှုကိုသက်သာစေရန်ဆေးဝါးများအပြင်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုများကိုစဉ်းစားပါ။
Antacids များသောအားဖြင့်အပူလောင်ခြင်းလက္ခဏာများကိုကုသရာတွင်အမြန်ဆုံးအလုပ်လုပ်သည်။ Rolaids (ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) (Rolaids ကူပွန်များ) ကဲ့သို့သောအပိုပစ္စည်းများမှာ၎င်းတို့ကိုယူပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းအက်စစ်ပျက်စေနိုင်သည်။ famotidine နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ်တွင်aရှိသည် လုပ်ဆောင်ချက်ပိုမိုမြန်ဆန်စတင်ခြင်း ။ သူတို့ကအပူလောင်ခြင်းကိုသက်သာစေသော်လည်း antacid သက်ရောက်မှုများသည်တစ်နေ့လုံးမကြာပါ။ H2 blockers နှင့် PPIs များသည်ကြာရှည်ခံပြီး GERD ကဲ့သို့သောနာတာရှည်အစာခြေအခြေအနေအတွက်သာသိုလှောင်ထားသည်။
Dulera vs Advair - အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီမှုများ
allegrad၂၄ နာရီလုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ